Soomaaliya: Nidaam La’aan. W/Q CabdiJaliil Maxamed | RBC Radio	Home
Friday, October 5th, 2012 at 04:23 pm	/ 19 Comments Wednesday, October 10th, 2012 at 12:34 am Soomaaliya: Nidaam La’aan. W/Q CabdiJaliil Maxamed
Soomaaliya: Nidaam La’aan
Oktoobar 10 2012
Magaca maqaalkan waxaad ka dheehan kartaa in si guud Soomalidu ay u la’adahay ama u hareer marsantahay nidaamka dawliga ah. maqaalkani waxaan ula jeedaa inaan ku iftiimiyo habraac la’aanta dawliga ah ee ka jirta soomalia inta aan ka gaaro. soomalia waxaa lagu sheegaa dal ay midayso waxyaabo badan oo ay wadamo badan oo caalamka ahi aysan dadkeedu midayn waxaana kamida in soomalidu tahay dad isku diin ah, dhaqan ah, af ah iyo waliba isku midab ah. hadaba waxaad ogataan in dadka noocaas oo kalle loo tilmaamaai aaney inta badan hal dal kuwada noolayn aduunka maanta.
qoraaga : cabdijaliil maxamad
Tags: CabdiJaliil Maxamed, Soomaaliya: Nidaam La'aan	8 Responses for “Soomaaliya: Nidaam La’aan. W/Q CabdiJaliil Maxamed”
Omar says:	October 10, 2012 at 2:46 am	If you don’t understand why we need federal system than you should not be writing about somali governance . I don’t know where you have been in last 50 years or so, but I can tell you there will never be a country called Somalia if we don’t respect the federal system and the new constitution.After completing my grade 4 education I had to travel 900km to come to Mogadishu for middle school and the humiliation and the name calling I had received fom my classmates in mogadishu still lingers in my mind. I don’t wish that experience for any other somali child. I can honestly say that experience has
affected me psychologically in a permanent way,
so please stop insulting our intelligence, and do little research on why many Somalis including myself would rather see no Somalia rather than going back to Mogadishu.
Shaarka says:	October 10, 2012 at 4:50 am	War Ninkaan Umadda Niyadda ka dilaa muxuu ahaa. Somaaliya waxey cagta saartay Xiligii la isku baabi i lahaa ku lahaa.
wadaad yare says:	October 10, 2012 at 11:33 am	Qoraagu halista ku digayo waa halis qof kastoo wax fahamsan u muuqata waana federalismka qoorta loo geliyey. Laakiin federlismku qur,aan ma ahane waa wax la baddali karo. In la baddalana waxaa kaliya oo ku xirantahey in dowladdu hanato gobollada Bartamaha iyo Koofurta dalka.
Markey intaas hanato dowladda iyo wakiillada iyo wax garadku waxey qiimeyn ku sameynayaan in gebigiisba federalka meesha laga saaro iyo in lagu saleeyo saddex. Waxeyna u badantahey in la laali doono.
Qorshe kale oo waxaa jira kaas dhinac socda oo ah in shan ilaa lix federal loo qeyb qeybiyo dalka.
Dadka federalka ku dheggan waxoodu cilmi kuma dhisnee baqdin iyo dulmi tirsasho iyo damac unbey ku dhisanyihiin.
Federalku uma shaqeyn karo habka hadda loo dhigayo, waana in ummaddu isku rogmato oo hadda iyo koow loo dhigo koob cusub oo dagaal ah.
Puntlander Man says:	October 10, 2012 at 1:22 pm	Qoraalkaan wuxuu I xasuusisay maalmo radio Muqdisho uu ku dhawaaqayay. Dulmi diidow dulmi doonaan aragnee dulmi diidow dab hulaaqay ka digtoonow. Maalmahas jidad muqdisho caadi uma mari karin anigoo dulmi la ii gaysto ka baqaya. Waxaa ii xigtay codadkii dadka qaar heesta ku jiray in ay hor boodayeen kooxdii dulmiga maanta meeshan na dhigay. Dowladnideena ma ahan aan ku dulmiyee dulqaad yeelo. qoraagu waxaan umalayn inuusan fahmin hanaanka dowladeed ee nooca federal. Waxaan u malayn inuu u qaatay reer hebel baa leh ceelka cid kalana ka cabi mayso. Hadaad sidaa u qaadatay. Taasi oo ay dadka qaarkii umad dhan uga tirtireen meelo lagu wada noola mudo aad u dheer. Qoraagu wuxuu ku cel celiyay Somali inay wax badan wadaagno waa sax afka aynu ku wada hadalna waxba nooma siyaadin aan ahayn in aan in laba qof aan loo kala tarjumay. Diintuna kaliya in aan masaajid ku wada cibaadasan karo. Ogow kuwa af, Diin, asal iyo midab wadaagin ayaa iska keen jecel si fiicana nabad ugu wada nool dulmina uusan ka jiri. Dhexdooda. Hadii la yiri guriga aynu harsano ninba meeshu ka joogo ha hagaajiyo ma ceeba. Heeshiisyada aan wada galayno ha ahaadeen kuwa cad cad oo Bari aynu isku dulmin sida dhacday. Ogow noloshu oo dhan waa heshiis la galay ka bilow qoys ilaa qaran. Hadalka waxaan ku soo xirin. Wax hala wadaago waxna halla kala lahaado
Cilmisabce? says:	October 10, 2012 at 2:24 pm	Fikir ahaan, anigu waxaan qabaa in nidaamka Federaalka uu san Soomaaliya waxba u tareynin. Waxaana Ra’iisal Wasaare Saacid u soo jeedin lahaa; in 18ka gobol ee Soomaaliya, uu gobol walba u magaaco 1 wasiir, 2 ku xigeen, agaasimayaal gobol iyo hal ama ka badan oo safiiro dibaddaha ah, gobolladana aan loo eegin hab Qabiil, balse loo eego hab xul iyo xal ah, Ka dibna uu baarlamaanka u gudbiyo. Haddii kale Qab iyo Iil maaro looma helayo. Raysal wasaaruhu ha ogaado in Maan dad uu yahay Miciyo caaraddood, isla markaana uusan wada qancin karin dhamaan maammulada jira.
Wadani says:	October 10, 2012 at 7:42 pm	aad ayaan ugu diirsaday farriinta ay xanbaarsantahay maqaalka qoraaga. dawlad kastaa oo soomaliya ka dhalataa waxa ugu horaysa ee ay lugaha lagalaysaa waa nidaam la’aantan federaalku ugu horeeyo. waxan ogayn ficilkii ugu danbeeyay ee madaxwaynuhu qaaday ee xulashada raysal wasaaraha. kadib ku dhawaaqidii raysal wasaaraha waxaa lais waydiinayay maamul hebel iyo maamul hebel muxuu ka orran doonaa. taasi ma nidaam baa mase waa qabyaaladii oo la casriyeeyay oo ah reer hebel maxay magaacibida reer hebel ka orran doonaan hadiise maamulka reer hebel diido sidee reerka kalle iyana nabad ula ahan doonaan. war meesha qoraagu ka hadlayo waa meel fog oo aan la huranayn loona joogee.
mohamuud says:	October 16, 2012 at 10:11 pm	ciidamadda soomaaliya mayihiin ciidamo soomaali oo dhan ka kooban mise waa kuwo hal beel ka kooban ama u badan, horta halkaa hala saxo .waa arinta ugu weyn dhibna ka imaan karo ciidamada dawlada dhexe waa inay ka yimaadaan dhamaan gobolada soomaaliya.qabiil qaran manoqdo
DEG DEG: Villa Soomaliya & IGAD oo isku Raacay masuuliyadda maamul u sameeynta goboladda laga saaray Al Shabaab